Top 20 racing egwuregwu n'ihi na android
Ị n'anya racing egwuregwu? Ọfọn, azịza ga-kasị-eleghị anya a 'ee'! Racing abụwo mgbe nile a na-ewu ewu niche n'etiti online gamers. Ekwu okwu banyere kpochapụwo racing egwuregwu na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọhụrụ ndị na android, na racing egwuregwu bụ mgbe niile a mmasị Atiya! Otú ọ dị na ọtụtụ racing egwuregwu ke ahịa, ọ bụ nnọọ ihe nkịtị n'ihi na ị na-adị mfe inwe mgbagwoju anya na ị na-ahọrọ otu n'ime ha. Ya mere, ebe anyị na-ewetara a ndepụta nke top 20 racing egwuregwu n'ihi na android nke ga-maa ịkpọlite ​​ndị adrenaline rosh na ahụ gị.
1. Njọ na-anwụ anwụ
A crazy mbanye site n'ala zombies onye ga-ize unu, ọgụ ị na ike ọbụna gbuo gị ma ọ bụrụ na ị na-ejide. Ị dị njikere maka nke a adventurous na-agba ịnyịnya? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ na-eche ọ dịghị ihe na-eche free download egwuregwu a n'ebe a!
Riptide GP2 bụ a zuru okè egwuregwu ka afọ ju gị agụụ maka racing egwuregwu. A na-akpali akpali ahụmahụ na mmiri n'elu, egwuregwu emesi dị ọcha mmiri ụgbọ mmiri racing na ihe ọ bụla ọzọ. Na ezi ndịna-emeputa na zuru okè nsonaazụ ụda, ihe egwuregwu bụ uru na-agbalị.
3. aghara Racing 3
Ọ bụrụ na ị na-ama-egwuri gara aga nsụgharị nke aghara Racing, mgbe ahụ, ị ​​na-maa aga na-enwe ọhụrụ a tọhapụ. The 3D gburugburu ebe obibi, dị iche iche racing ugbo ala tinyere na kpochapụwo obi ụtọ nke aghara Racing bụ nke zuru okè Nchikota ihe dị ịtụnanya racing egwuregwu na ga-esi ike iguzogide!
Ahịa: $ 1.2
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ezi uche egwuregwu na i nwere ike igwu gị smart ekwentị. Nke a racing egwuregwu na-agụnye a ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ dị ka customization nke ugbo ala wdg
Egwuregwu esesịn natara ukwuu tokwara n'ihi na ya elu mkpebi ndịna-emeputa na-akpali akpali adventurous ibé. The egwuregwu atụmatụ top ugbo ala dị ka Ferrari na Benz.
A mgbe racing egwuregwu ebe onye na-akwọ nwere ọbụ ebumnuche nke na-akwọ ụgbọala ụgbọala ya site na arọ okporo ụzọ iru ya ebe, okporo ụzọ Racer bụ ezigbo ụzọ nke na-egbu oge maka ukporo gamers.
A ezi ụtọ maka akwa gamers, nke a bụ ọhụrụ android dakọtara version nke kpochapụwo egwuregwu na ị na-eji na-egwu na gị ochie kọmputa. Egwuregwu si egwu ndịna-emeputa, top notch ugbo ala na zuru okè nsonaazụ ụda ga ngwa ngwa-eme ka ị ya ofufe.
8. Hill ọrịrị Racing
A mfe ma ọmarịcha egwuregwu na nkezi ndịna-emeputa, egwuregwu a nwere ike ịbụ otu n'ime ndị kacha amasị egwuregwu n'ihi na nwa gị. Atụmatụ dị ka enyi na enyi gburugburu ebe obibi na dị iche iche oke nke ugbo ala ga-eme ka gị nwa ewu n'anya egwuregwu!
A kpochapụwo ụgbọala racing egwuregwu n'ihi na android, egwuregwu a na-agwakọta a ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ dị ka customizable ụgbọala na multi-ọkpụkpọ ịma aka.
SBK14 bụ ezi uche igwe kwụ otu ebe racing egwuregwu na pụtara ndịna na igbagburugburu ụda.
11. Iwe nnụnụ na Go!
Idebe ewu ewu na nke Iwe nnụnụ n'uche, ọhụrụ a Iwe nnụnụ Go e mepụtara ihe niile na-racing egwuregwu ndị hụrụ. The iwe anụ ufe isonyere kart racing fun igbo racing agụụ nke ọkpụkpọ.
12. Mkpa N'ihi Speed ​​Kasị Chọrọ
Nke a bụ android version nke kpochapụwo NFS egwuregwu na ị na-egwuri na kọmputa gị.
A ezigbo racing egwuregwu na ụfọdụ n'ime n'elu ụgbọala n'ichepụta aha dị ka Ferrari, CSR racing yiri kpochapụwo racing egwuregwu ma e wezụga n'ihi ole na ole iche.
14. Real nwayọọ Car Racing
Na-amasị gị egwuregwu nke nwayọọ Racing? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ Real nwayọọ Car Racing bụ ihe niile mgbe ị na-chọrọ! Na 3D drifts na customizable ụgbọala, e nwere ihe ọ bụla ọzọ a ọkpụkpọ nwere ike iche maka!
Ị na-enwe ụgbọ mmiri racing? Ọ bụrụ na ee, mgbe ahụ egwuregwu a ga-a ezi ụtọ nke ọ bụla ụgbọ mmiri racing n'anya. Egwuregwu bụ ọhụrụ gbawara na ụwa nke android racing egwuregwu.
16. èbè gbara Racing
A obere dị iche iche si mgbe Arcade racing egwuregwu dị na ahịa, èbè gbara Racing siri ike, na-akpali akpali na-akụda mmụọ n'otu oge.
17. Beach ịnyịnya na-adọkpụ Blitz
A ọhụrụ egwuregwu si mmepe nke Riptide GP2, na Beach ịnyịnya na-adọkpụ Blitz ga-enye gị obi na-adị nke na-efe efe gburugburu osimiri.
18. Oke Car Driving Simulator
Wepụtara na 2014, Oke Car Driving Simulator aghọwo-ewu nnọọ ewu n'etiti ndị mmadụ ruru ya ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ dị ka ị na-elele ụgbọala si dị iche iche angles na customizing ya.
19. Fast & oké iwe Hapụrụ
Hụrụ n'anya na-Fast 7 nkiri usoro? Na-eru ya niile n'ike mmụọ nsọ si nkiri, egwuregwu a ga-a zuru okè oke maka niile Fast 7 usoro ndị hụrụ.
N'anya anyịnya igwe? Ọ bụrụ otú ahụ ọhụrụ Bike racing 3D bụ egwuregwu na i mgbe niile na-achọ!
> Resource> Game> Top 20 Android Racing Games I Kwesịrị Gbalịa